Izindaba - Yini i-amplifier？
Imishini ye-karaoke ngaphezu kwezipikha, okokusebenza komculo kubaluleke kakhulu, ikhwalithi yesikhulisi uqobo nayo ibaluleke kakhulu. Umsebenzi we-KTV kufanele uhlanganiswe nosayizi wekamelo lakho nezinto zokuhlobisa. Izindawo ezahlukahlukene zamakamelo kufanele zisebenzise izikhulisi zamandla ezahlukahlukene. Nakani ukufaniswa kwesikhulisi samandla nesipika.
Amandla esihlanganisi se-karaoke power amplifier aklanywe esigabeni sokuqala ngokuvamile mancane, futhi izipikha ezisekelayo yizipikha zamandla ezincane ezinokuzwela okuphezulu. Inkinga ejwayelekile kunazo zonke ukukhala kwempendulo. Isizathu ukuthi amandla kagesi akwanele lapho ivolumu iphezulu, okuholela ekuphambekeni okukhulu kwesiginali. Ngaphezu kwalokho, ukuhlanekezwa kwesipikha sokuzwela okuphezulu kuyimpendulo, futhi ukuphazamiseka kukhuliswa okuyindilinga, okuholela ekukhaleni kwempendulo. Empeleni, imbangela enkulu yokubhonga ngempendulo ukuphazamiseka. Ukunciphisa ukuhlanekezela kunganciphisa amathuba okukhala kwempendulo. Kodwa-ke, akunakushiwo ukuthi ngeke kube khona ukukhala kwempendulo. Kuphela ebangeni lokuzuza elitholakalayo, lapho inzuzo inkulu ngokwanele, kuzoholela ekukhaleni kwempendulo. Okusho ukuthi, i-karaoke power amplifier kufanele ikhethe amandla aphezulu ngangokunokwenzeka. Kodwa-ke, amandla e-amplifier yamandla ayanda, kunamandla umuzwa womsindo. Ngokuhlangenwe nakho okusebenzayo, kungakhethwa isiteshi ngasinye ngaphakathi kwe-8 Ω 450W.
Igumbi elingaphansi kwamamitha-skwele ayi-18 ngokuyisisekelo i-amplifier yamandla karaoke eyenzelwe kahle. Kodwa-ke, i-echo yendabuko izodala ukungaqiniseki komsindo ozwakalayo, futhi imiphumela yokulungisa iphutha lesimenywa ngasinye ingenza umphathi angalokothi akwazi ukuthola umphumela endaweni ebumbene, okuzophinde kukhathale uDJ. Isizathu sesibili sokusebenzisa i-amplifier yamandla ngeprosesa ye-DSP ukuthi i-chip yendabuko yokucubungula i-chip inebanga elincane lokuphendula imvamisa (ngaphansi kuka-8kHz) kanye nemvamisa yesampula ephansi, okwenza ukuthi kungabi nemininingwane endaweni edinga ukukhishwa kwamandla okuphezulu. Imvamisa yesampula ye-DSP ka-48K nebanga lemvamisa elibanzi lama-20hz-23khz liletha ikhwalithi yomsindo engcono namandla aphakathi nendawo nalawo aphansi. Kungakho singeke sikwazi ukucula abantu, uma nje kusetshenziswa i-DSP amplifier yamandla, izwi labo lenziwa laba muhle ngokuzumayo, ukukhanga okungaphezulu kwamandla kazibuthe, okukhanga ngokwengeziwe, nokuzwakala kukhululekile.
Isizathu sesithathu sokusebenzisa i-amplifier yamandla ngeprosesa ye-DSP ukuthi iprosesa yomphumela we-DSP ingagcina idatha yemiphumela eminingi, futhi ingaletha nomphumela "we-reverb" ongasebenziseka ngempela, unikeze abathengi ulwazi oluthe xaxa lwe-k, uzobona ngempela i-karaoke yokuzenzela yabathengi, futhi kunciphisa kakhulu ukufunwa kwensiza ye-DJ. Ngaphezu kwalokho, ngomsebenzi wokuqalisa othomathikhi wohlelo lwe-VOD, umphumela womsindo wamakamelo wangasese nawo ungafinyelela ekuqaleni Ezingeni elifanayo. Ukukhuluma iqiniso, egumbini elizimele elingaphansi kwamamitha-skwele ayi-18, uma nje sihlola ikhwalithi yomsindo, umphumela we-echo wendabuko owakhiwe kahle awaphansi kunalowo we-DSP, kepha ubonakala umkhulu futhi uthambile. I-DSP inokuncane kokunambitheka kwedijithali, okungathambile ngokwanele. Uma i-LPF ye-DSP ishintshelwa ku-8kHz, ukuqhathanisa phakathi kwalokhu kuyacaca. Umehluko omkhulu ngamandla aphansi-imvamisa, intshiseko nobukhulu.
Ukukhethwa kwesikhulisi samandla we-karaoke esihlanganisiwe nokulungiswa kwangaphambi nangemuva kokuqhekeka ikakhulu kuya ngezidingo zangempela zegumbi lesicelo. Kumakamelo angaphansi kwamamitha-skwele ayi-18, kunconywa ukuthi ukhethe i-DSP ehlanganisiwe ye-karaoke power amplifier engaba ngu-200W; amakamelo anendawo engaphezu kwamamitha-skwele angama-18 kuya kumamitha-skwele angaba ngu-25, isiteshi sesithathu se-200 W DSP samandla kagesi singakhethwa ukukhulisa isikhulumi esiphakathi njengesengezo sezwi lomuntu esiphakathi nendawo; Igumbi elizimele elinamamitha-skwele angaphezu kwama-25 kufanele licatshangelwe Ngokuya kwesimo sangempela segumbi, izici ezinjengezinga lengcindezi lomsindo, ukufana kwensimu yomsindo nokusungulwa kwensimu yokubuyisa kabusha kubhekwa kakhulu. Amandla afanele akhethwa ngokuhlanganisa izici zesipika nesikhulisi samandla esiteji sangemuva sesipikha esikhulu. Isikhulisi samandla esiteji esinamandla amaningi esisezingeni eliphansi singasetshenziswa ukunciphisa izindleko zesipikha samandla aphansi asizayo.
I-Karaoke Microphone Ephathekayo, Isibonisi se-Miracast, I-Karaoke yeMakrofoni engenantambo, Cula isidlali seMagic Karaoke,